कोपा अमेरिकाः अर्जेन्टिना भर्सेस भेनेज्वेला, ‘हेड टु हेड’मा को बलियो ? – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२६ असार २०७७, शुक्रबार ०७:३५ English
कोपा अमेरिकाः अर्जेन्टिना भर्सेस भेनेज्वेला, ‘हेड टु हेड’मा को बलियो ?
ब्राजिल, १३ असार । ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगितामा आज दोस्रो क्वार्टरफाइनल खेल हुँदैछ । नेपाली समयअनुसार शनिबार बिहान १२ः४५ बजेबाट सुरु हुने खेलमा अर्जेन्टिना र भेनेज्वेला भिड्दैछन् ।
अर्जेन्टिना समूह ‘बी’बाट उपविजेता बनेर अन्तिम आठमा पुग्दा भेनेज्वेला पनि समूह ‘ए’को उपविजेजता बनेको थियो । पछिल्लो पटक गत मार्चमा स्पेनमा यी दसई टिमले मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलेका थिए । त्यतिबेला मेस्सीसहितको अर्जेन्टिनालाई भेनेज्वेलाले ३–१ ले निराश बनाएको थियो ।
विगतमा यी दुई देशको रेकर्ड कस्तो छः
यो तथ्यांक हेर्दा अर्जेन्टिना भेनेज्वेलाभन्दा निकै शक्तिसाली देखिन्छ । सन् १९५६ देखि सन् २०११ सम्मको अवधिमा अर्जेन्टिनाले भेनेज्वेलाविरुद्ध खेलेका सबै १९ खेल नै जितेको थियो । त्यसयताका ६ खेलमध्ये अर्जेन्टिनाले दुई खेल हार्दा दुई खेल बराबरी गरेको थियो ।
पछिल्ला ५ खेलको नतिजाः
२२ मार्च, २०१९ः अर्जेन्टिना १ – ३ भेनेज्वेला
५ सप्टेम्बर २०१७ः अर्जेन्टिना १–१ भेनेज्वेला
६ सेप्टेम्बर २०१६ः अर्जेन्टिना २–२ भेनेज्वेला
१८ जुन २०१६ः अर्जेन्टिना ४–१ भेनेज्वेला
२२ मार्च २०१३ ःअर्जेन्टिना ३–० भेनेज्वेला
१३ असार २०७६, शुक्रबार १७:१४ मा प्रकाशित